Shariif oo la kulmay Madaxweynaha Talyaaniga - BBC News Somali
Shariif oo la kulmay Madaxweynaha Talyaaniga
Aden Sabrie BBC Rome
20 Luulyo 2010
Image caption Wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga Franco Frattini iyo Madaxweyne Shariif Axmed
Madaxweynaha dawladda kumeelgaarka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa booqaasho ku jooga magaalada Rooma, booqashadaasi oo ah tii u horreysay oo Madaxweyne Soomaaliyeed uu ku tago dalka Talyaaniga, tan iyo markii ey burburtay dawladdi dhexe ee Soomaaliya labaatan sanadood ka hor.
Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ka yimid magaalada Qaahira halkaasi oo uu kulamo kula yeeshay Madaxweynaha dalka Masar Xusni Mubaarak iyo xubno kale oo ka tirsan dawladda Masar.
Madaxweyne Sheekh Shariif oo ey wheliyaan wasiirka arrimaha dibadda Yusuf Hassan Ibrahim , wasiirka gaashandhigga Abuukar Cabdi Cusman iyo wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta Cabdrizaaq Cusman Xasan Juriile waxaa uu ka qeybgalay kulan ka dhacay xarunta wasaaradda arimaha dibadda Talyaaniga ee Farnesina. Waxaana kulankaasi dhinaca Talyaaniga hoggaaminayey wasiirka arrimaha dibadda Talyaaniga Franco frattini.
Kulankaasi waxaa si gaar ah loogu faaqiday xaaladda ey ku sugan tahay Soomaaliya, gooni ahaan dhinaca amniga iyo nabadeynta dalka.
Intii u socday kulankaasi sida uu leeyahay war ka soo baxay wasaaradda dibadda Talyaaniga, wasiirka Frattini waxa uu ka tacsiyey, dadki ku dhintay dagaaladi dambeeyey ka dhacay magaalada Muqdihso.
Wasiirka Talyaaniga waxa uu shirka ka xaqiijiyey taagerada siyaasadeed iyo mid dhaqaleedba oo Talyaanigu uu la garab taagan yahay nabadeynta Soomaaliya. Dawladda Talyaanigu ayuu ku daray waxa ey sii wadi doonta inay kaalinteeda ka geysato sidii xal loogu heli lahaa dhibaatada Soomaliya.
Frattini waxaa uu la socodsiyyey wafidga Soomaalida in dhammeestir ey ku dhow yihiin tabaha loo diyaarinayo, tababar ey ciidamada Talyaaniga ee loo yaqaan Carabinieri u fidiyaan kun askari oo boliiska Soomaalida ah oo kari kara inay qaadaan hawlgallo ka dhan ah argagaxisada, iyadoo islamarkaasna ey socoto daraasad la xiriirta hirgalinta mashruuc ku saabsan diyaarinta ciidan u qeybsan ilaalada xeebaha.
Talyaaniga waxaa maalmihi la soo dhaafay uu bixiyey hal malyan oo euro oo loogu tala galay ciidamada amniga, iyadoo labo malyan euro oo kalena loogu tala gali doono maamulada dawladda federaalka ku meelgaarka.
Hey'adda gargaarka dibadda Talyaanigana waxaa u qorsheysan tallaabooyinka kale oo lagu gargaarayo Soomaaliya oo lagu qiyaasay lacag dhan shan malyan iyo laba kun oo euro.
Marka la isu geeyo gargaarka maaliyadeed ee Talyaanigu ugu tala galay Soomaaliya laga billabo 2009 ilaa maantay, waxay kor u dhaafayaan 27malyan oo euro.
Wasiirka dibadda Talyaaniga, waxa uu ka codsaday dawladda Soomaaliya inay si adag oo muuqata oo laga fiirsaday u xulato shaqaalaha ey tahay in tababarada loo fidiyo, isla markaasi si buuxda isugu shuqliso hawsha dib u heshiisinta.
Madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaa dhinaciisa uu ugu mahadceliyey Talyaaniga, hawsha ey ka wadaan dhinaca caalanka iyo midka tooska ah oo wax loogu qabanayo dalkiisa.